ဘလော့(ဂ်) ဂါ Sign In လုပ်၍ မရခြင်း | ရွှေမင်းသား
Home » ကြေငြာချက် » ဘလော့(ဂ်) ဂါ Sign In လုပ်၍ မရခြင်း
ဘလော့(ဂ်) ဂါ Sign In လုပ်၍ မရခြင်း
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Wednesday, August 22, 2007
ဒီကနေ့ ညပိုင်း အချိန်လောက်မှာ ဘလော့(ဂ်) ဂါ Sign In လုပ်လို့ မရကြဘူး ဖြစ်နေတယ်... ဘာက ဘယ်လို ဖြစ်မှန်းမသိကြပါဘူး..ဘလော့(ဂ်) လိပ်စာ ကိုရိုက် ထည့်တော့.....
အဲဒါ ပေါ်လာတယ် ဗျ..လူအတော်များများ မရကြဘူးလို့ ပြော နေကြပါတယ်.......ဖွင့်လို့ရတဲ့ ဘလော့(ဂ်)တွေမှာ လည်း Sign In ဘားကပျောက်နေတယ်.......အဲဒီမှာ တော်တော် ဒုက္ခ ရောက်သွားတာပဲ....၁၀ နာရီ ခွဲ လောက်မှ ပြန်ရတာဗျို့.......
Yes, you have truly told achat levitra I consider, that you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will communicate.